Inqaba yaseBhabheli - Isishwankathelo seNdaba kunye nezifundo
Isifundo Kususela kwiNqaba yeBabel Ibali leBhayibhile
Ngezihlandlo uThixo usenelela ngeSandla sokuSahlukana kwiMicimbi yoMntu
IGenesis 11: 1-9.
Inqaba yaseBhabheli Inkcazo yeNdaba
Ibali leBabel ibali yenye yeendaba ezibuhlungu kunye neyona nto ibalulekileyo kwiBhayibhile. Kubuhlungu kukuba ibonisa ukuvukela kwintliziyo yomntu. Kubalulekile kuba liphinde lwakhula uphuhliso lweenkcubeko ezizayo.
Ibali lisetyenziswe eBhabheli , esinye sezixeko esakhiwa nguKumkani uNimrode, ngokweGenesis 10: 9-10.
Indawo yendawo enqabileyo yayiseShinare, eMesopotamiya yasendulo kwimida yaseMpuma yoMlambo i-Ewufrathe. Abaphengululi beBhayibhile bakholelwa ukuba inqaba yayihlobo lwepiramidi ebizwa ngokuba yi- ziggurat , eqhelekileyo kwiBhabhiloni.
Kuze kube le ngongoma eBhayibhileni, ihlabathi lonke linalo ulwimi olulodwa, oku kuthetha ukuba kukho inkulumo enye eqhelekileyo kubo bonke abantu. Abantu behlabathi babebe nezakhono ekwakheni baza banquma ukwakha isixeko esinomkhunqu owayeza kufinyelela ezulwini. Ngokwakhiwa kwinqaba, babefuna ukwenza igama kunye nokukhusela abantu ukuba basasazeke:
Bathi ke, "Wozani, sizakhele umzi nenqaba kunye nentloko yayo emazulwini, sizenzele igama, hleze sihlakazeke phezu kobuso bomhlaba wonke." (Genesis 11: 4, ESV )
UThixo weza ukuza kubona isixeko sawo kunye nenqaba ayakhayo. Wayeqonda iinjongo zabo, kwaye ngobulumko bakhe obungapheliyo, wayesazi ukuba "inyuko ezulwini" yayiza kubakhokela abantu kude noThixo.
Injongo yabantu kwakungekho ukukhazimulisa uThixo nokuphakamisa igama lakhe kodwa ukwakha igama.
KuGenesis 9: 1, uThixo wathi kubantu: "Zalani nande, nigcwalise umhlaba." UThixo wayefuna ukuba abantu basasaze baze bazalise umhlaba wonke. Ngokwakhiwa kwinqaba, abantu babengawuthobeli imiyalelo kaThixo ecacileyo.
UThixo waphawula ukuba yintoni inamandla ebumbene ngayo injongo yabo. Ngenxa yoko, wadibanisa ulwimi lwabo, ebangela ukuba bathethe ezininzi iilwimi ukuze bangaqondi. Ngokwenza oku, uThixo wawanqanda izicwangciso zabo. Waphinde wabanyanzelisa abantu besixeko ukuba bahlakaze bonke ubuso bomhlaba.
Izifundo ezivela kwiNqaba yeBabel
Yintoni engalunganga ngokukwakha le nqonga? Abantu beza kunye ukuze bafeze umsebenzi ophawulekayo wokumangalisa nobuhle bokwakha. Kutheni kwakukho okubi kangaka?
Inqaba yayikulungele, kungekhona ukuthobela . Abantu babenokwenza oko bekubonakala kubhetele kubo kwaye kungekhona oko uThixo ayeyalile.
Ibali leBhabheli ibhala ligxininisa ukuchasana okucacileyo phakathi kweembono zabantu kwimpumelelo yakhe kunye nembono kaThixo kwimpumelelo yomntu. Inqaba yiprojekthi enkulu-eyona nto eyenziwa ngumntu. Kufana neendlela zokuhlaziya abantu eziqhubekayo zokwakha nokuziqhayisa namhlanje, njenge- International Space Station .
Ukwakha inqaba, abantu basebenzisa izitena endaweni yelitye kunye neetata endaweni yomdaka. Baye basebenzisa "izinto ezenziwe ngabantu," endaweni yezinto ezizinzileyo "ezenziwe nguThixo". Abantu babakha isikhumbuzo kubo, ukubiza ingqalelo kwiikhono zabo kunye nempumelelo yabo, kunokuba bazukise uThixo.
UThixo wathi kuGenesis 11: 6:
"Ukuba abantu abodwa bathetha ulwimi olufanayo baqale ukwenza oku, akukho nto baceba ukuyenza abayi kuba nzima." (NIV)
Ngaloo nto, uThixo wabonisa ukuba xa abantu bebumbene ngenjongo, banako ukufezekisa izinto ezingenakwenzeka, zombini ezihloniphekileyo nezingenakuzimela. Yingakho ubunye emzimbeni kaKristu kubaluleke kakhulu kwimigudu yethu yokufeza injongo kaThixo emhlabeni.
Ngokwahlukileyo, ukubambisana kwenjongo kwimicimbi yehlabathi, ekugqibeleni, kunokutshabalalisa. Ngombono kaThixo, ukwahlukana kwimiba yehlabathi ngamanye amaxesha kuthandwayo kwizinto ezinzulu zokukhonza izithixo nokuhlubuka. Ngenxa yoko, uThixo ngamanye amaxesha ungenelela ngesandla sokuhlukana kwimicimbi yabantu. Ukuthintela ukuzikhukhumeza ngakumbi, uThixo uyadibanisa aze ahlule izicwangciso zabantu, ngoko awanqali imida kaThixo kubo.
Xa uThixo uthetha kweli bali, usebenzisa igama elithi "masihambe," sichaza uZiqu zintathu .
Abanye abaphengululi bakholelwa ukuba oku kubonisa ingongoma kwimbali apho uThixo wahlula umhlaba ube ngamazwekazi ahlukeneyo.
Ngaba kukho naziphi na izenzi ezenziwa ngabantu "ezitebhisayo ezulwini" owakhayo ebomini bakho? Ukuba kunjalo, yeka uze ucinge. Ngaba iinjongo zakho zihloniphekile? Ngaba iinjongo zakho zihambelana nentando kaThixo?
Imfazwe Yehlabathi II: I-USS Wasp (CV-18)
Kutheni kwaye nawaphi amaMuslim amantombazana agqoka i-Hijab?
UArtemis, umfazikazi ongumGrike wamaHunt
Dyslexia kunye neDysgraphia